Go’aankiisa Ka Fariisashada Jarmalka, Sababtii Kulanka Erdogan & Wax Walba Oo Ku Qornaa Warqadii Uu Mesut Ozil Ku Sharraxay Go’aankiisii Layaabka Noqday. | Raadgoob
Go’aankiisa Ka Fariisashada Jarmalka, Sababtii Kulanka Erdogan & Wax Walba Oo Ku Qornaa Warqadii Uu Mesut Ozil Ku Sharraxay Go’aankiisii Layaabka Noqday.
Kubad sameeyaha Arsenal Mesut Ozil ayaa qalinka u qaatay warqad furan oo uu ku difaacayo sawirkii muranka badan dhaliyay ee uu bishii May la galay madaxweynaha dalka Turkey Recep Tayyip Erdogan.
Mesut Ozi iyo saaxiibkiisa qarnaka Jarmalka Ilkay Gundogan ayaa qabsaday hadal heynta kubadda cagta Jarmalka kadib markii ay ka qeyb-qaateen olole ay masuuliyiin badan ku tilmaameen iney tahay sawir la siyaasadeeyay.
Waxey taasi dhalisay inuu ciyaariyahanka aad ula cajiibo habka dhaqanka dadka Jarmalka, iyado la ogyahay inuu yahay shaqsi asalkiisa yahay Turkey, sidoo kalana ka mid ah xiddigaha ugu fiican ee heystaan jiilkaan Jarmalka.
Mesut Ozil wuxuu ahaa shaqsi aad looga sharfay Jarmalka dhawr jeer, sidoo kalana ku guuleystay abaalmarinta xiddiga qaranka tirada ugu badan sanadahii ugu dambeyay, balse dhaleeceyntii uu ka helay sawirka Erdogan iyo eedeymahii fashilkiisa koobka Adduunka ayaa isku biirsaday taasoo keentay inuu waraaqad dheer oo wax walba lagu sharraxay qoray.
“Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaan helay waqti aan si qoto dheer ugu fakaro, waqti aan uga fakaro wixii dhacay bilahii lasoo dhaafay, sidaas darteed waxaan doonayaa inaan idinla wadaago maankeyga iyo dareenkeya ku aadan wixii dhacay”
“Sida dad badan, faraceyga wuxuu raad ku leeyahay in ka badan hal wadan. Iyadoo aan kusoo koray Jarmalka, hadana qoyskeyga asal ahaan waxey kasoo jeedaan Turkey. Waxaan leeyahay laba qalbi, mid Jarmal ah iyo mid Turkey ah. Intii aan caruurta ahaa, hooyadey waxey i bartay inaan mar walba xushmeeyo oo aan illoobin halkii aan ka imid, waana qiimah aan ka fakaro ilaa maanta”
“Bishii May, waxaan kula kulmay madaxweyne Erdogan magaalada London, intii lagu jiray dhacdo sadaqo aruurin iyo mid waxbarasho aheyd. Markii ugu horreysay waxey aheyd 2010 xilli isaga iyo Angela Merkel ay daawanayeen kulan u dhaxeeyay Jarmalka iyo Turkey kana dhacay Berlin. Markaas kadib, waxaan kulannay wax badan. Waxaan ogsoonahay in sawirkeena uu sababay jawaabo waaweyn oo ay bixiyeen saxaafadda Jarmalka, iyadoo dadka qaar ay igu eedeeyeen inaan been sheegayo ama aan khiyaanoole ahay, sawirka aan galnay ma xambaarsana wax siyaasad ah. Sida aan horay u sheegay hooyadey waligey iima ogolaan inaan lumiyo aragtida awoowayaashey, dhaxalkooda iyo dhaqanka qoyska. Aniga ahaan Sawirka aan la galay Erdogan ma aheyn wax la xiriira siyaasad iyo doorasho, waxey aheyd wax ku saabsan xushmeynta aan u hayo xafiiska ugu sarreeya qoyska dalkeyga. Shaqadeyda waa kubadda cagta mana ahi siyaasi, kulankeena ma aheyn waxa ku saabsan ogolaansho siyaasad walba. Xaqiiqdii waxaan ka hadalnay mowuuc la mid ah kulamadii ka horeeyay – kubadda cagta – maadaama uu ahaa ciyaartoy waqtigiisii yaraanta”
“Inkastoo saxaafadda Jarmalka ay sawir ka duwan bixiyeen, runta waxey tahay inaan ula kulmin madaxweynaha si aysan ixtiraam darro ugu noqon halka ay kasoo jeedaan awoowayaashey, kuwaas oo aan ogahay iney ku faraxsan yahiin halka aan maanta joogo. Aniga ahaan, wax macno ah iima lahan qofka uu ahaa madaxweynaha, waxaa muhiim ii ah inuu ahaa madaxweynaha. ixtiraamka siyaasadeed waa aragti aan hubo iney ka timid labadaba boqoradda iyo ra’isulwasaare Theresa May marka ay Erdogan ku martigaliyeen London. Hadii uu ahaan lahaa madaxweynaha Turkiga iyo kan Jarmalka, ficilka aan ka sameyn lahaa meeshaas isma badaleen”
“Waxey ila tahay in tani ay tahay mid adag in la fahmo, sida ugu badan dhaqamada siyaasadeed ee hogaamiyayaasha lama dhihi karo waa mid ka duwan dadka. Balse kiiskaan waa wax ka duwan. Wax walba oo natiijo ahaan kasoo baxay waxey ahaadeen doorashii horreysay, ama waxa ka dambeeya doorashada”